Ikotishi elihle, eliseduze nolwandle kanye neMotu Trail.
Ikotishi elihle, eliseduze nolwandle kanye neMotu Trail. Kuyimfihlo futhi Kucashile!
Ukuhamba ngebhayisikili, ukugibela izintaba, ukudoba, ukukaya, ukuzingela noma ukuphumula. 5 Amaminithi ukusuka ku-Opotiki
I-Renga Renga Retreat iyikotishi elisha, elinomoya futhi lesimanje, futhi lihlinzeka ngendawo ephumuzayo kakhulu yokuhlala. Leli khaya elinokuthula lizungezwe izihlahla ezivuthiwe nokuphila kwezinyoni inala, kuhlanganise namaTui amaningi nabanye abantu bomdabu. Itholakala eduze nolwandle, kanye ne-Motu Trail, futhi uhambo olufushane nje lwemizuzu emi-5 ukuya e-Opotiki, i-Renga Renga Retreat iyindawo ekahle kakhulu yeholide.
4.93(61 okushiwo abanye)
4.93 · 61 okushiwo abanye
I-Renga Renga Retreat izungezwe izihlahla ze-Pohutukawa ezivuthiwe, i-Banksia kanye Neminqumo, i-lavender ewubukhazikhazi, insimu encane yezihlahla zezithelo nemivini, futhi iheha inala yezinyoni. Leli kotishi liqanjwe ngemigqa ye-Renga Renga lily emngceleni womgwaqo ongena endaweni eyayilinywa amaMaori ukuze idle ezinsukwini zangaphambili.
I-Motu Trail idume ngokuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngezinyawo, futhi iqhele ngamamitha angu-100, futhi izindunduma zesihlabathi ezidumile nolwandle olubanzi kungaphezu nje komkhondo.
Ikotishi selilungiswe ngokuphelele futhi lisha futhi lihlanzekile, linezinsiza zesimanje. Ifaka igumbi lokulala elilodwa elinelanga elinombhede we-Queen kanye negumbi lokugezela le-ensuite. Umbhede ogoqiwe uyatholakala kusivakashi esengeziwe, futhi usofa omude ungase ulale ingane egumbini lokuhlala, nokho, izihambeli ezengeziwe zizodinga ukwabelana ngegumbi lokugezela le-en-suite.
Ikhishi/indawo yokudlela neyokuphumula ilula futhi iyakhanya kanti ikhishi lihlinzeka ngehhavini yesimanje kagesi, ihhavini likagesi kanye ne-microwave convection. Kunesitezi esikhulu esinesambulela selanga ukuze uziphumulele ngewayini noma ikhofi, futhi ucolise i-ambience yendawo ekuzungezile. Kukhona futhi umshini wokuwasha ukuze ukwazi ukuwasha ngesikhathi samaholide.
Sihlala kule ndawo ngakho-ke singaqiniseka ukuthi ukuthokozela ngokuphelele ukuhlala kwakho.